भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना- यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत ! - Khabar Nepali
होमपेज / समाचार / भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना- यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत !
भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना। यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत। जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन सम्बन्धित दुर्लभ न्यूरोलोजिकल डिस्अर्डर गियान बार सिन्ड्रोमबारे अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन एफडीएले नयाँ चेतावनी जारी गरेको छ । भ्याक्सिन प्रदान गरिएका साढे १२ मिलियनमध्येबाट एकसयजनामा यस्तो सिन्ड्रोम देखिएपछि एफडीएको नयाँ चेतावनी आएको हो ।